एउटा घरमात्र भएको दुनियाँकै अनौठो सहर
May 25, 2019 May 25, 2019 Subas B.K0
कुनै पनि सहरमा कतिवटा घर होलान् ? सयौं घरहरु नभएको ठाउँलाई कसरी पो सहर भन्न सकिएला र ? भन्नुहोला । तर यो दुनियाँमा एउटा मात्र घर भएको सहर पनि हुँदो रहेछ । एउटै घर मात्र रहेको त्यो सहरमा त्यहीँ एउटा घरभित्रै सहरमा हुनुपर्ने सबैखाले सुविधा छन् भन्ने सुन्दा तपाईंलाई अझ अचम्म लाग्ला । यो अनौठो […]
पुरा पढ्नुहोस् ...
मेसीलाई छैटौंपटक जिते गोल्डेन बुट
एजेन्सी – बार्सिलोनाका कप्तान लिओनेल मेसीले करिअरको छैटौं पटक युरोपेली गोल्डेन बुट जितेका छन् । युरोपको लिगहरुमध्यका सर्वाधिक गोलकर्तालाई प्रदान गरिने अवार्ड मेसीले लगातार तेस्रो सिजन हात पारेका हुन् । मेसीले स्पेनिस ला लिगाका ३४ खेल खेल्दै ३६ गोल गरेका हुन् । दोस्रो स्थानमा रहेका पीएसजीका युवा फरवार्ड किलियन एमबाप्पेभन्दा यो संख्या ३ गोल बढी […]
रेडियो एपोस्टलको स्टेसन म्यानेजरमा राकेस पुन नियुक्त
May 24, 2019 May 24, 2019 Rijan Bhujel0
समाज परिवर्तनको लागि सकारात्मक सोचको अपरिहार्यतालाई मुल नारा बनाइ विगत ३ वर्ष अगाडी बगरको नयाँ गल्लीमा संचालित रेडियो एपोस्टल १०२.६ मेगा हर्जले एक जुझारु तथा सक्रिय व्यक्तित्व राकेस पुनलाइ स्टेसन म्यानेजरको रूपमा नियुक्त गरेको छ।विभिन्न मनोरञ्जनात्मक तथा शिक्षामुलक कार्यक्रमहरु प्रसारणको साथ साथै थुप्रै सामाजिक काम समेत सफलताको साथमा सम्पन्न गरि सकेको रेडियोलाई अझ सक्रियताको साथमा […]
May 13, 2019 May 13, 2019 Subas B.K0
एजेन्सी – म्यानचेस्टर सिटीले इंग्लिस प्रिमियर लिगको उपाधि जितेको छ । आइतबार भएको अन्तिम खेलमा ब्राइटन एन्ड होभ एल्बियनको घरेलु मैदानमा सिटीले ४-१ को फराकिलो जित दर्ता गर्दै उपाधि पक्का गरेको हो । खेल दौरान एक समय सिटी १-० ले पछाडी रहँदा लिभरपुलले अग्रता लिँदै उपाधि होडमा अगाडी रहने देखिएको थियो । ब्राइटनका लागि खेलक […]
मुम्बईले चौथो पटक जित्यो आईपीएलको उपाधी
एजेन्सी। आईपीएल क्रिकेटको १२ औं संस्करणको उपाधि मुम्बई इन्डियन्सले जितेको छ । आइतबार राति भएको फाइनल खेलमा चेन्नाई सुपर किंग्सलाई १ रनले स्तब्ध पार्दै मुम्बईले चौथो पटक आईपीएलको उपाधि उचालेको हो ।हैदरावादको राजीव गान्धी स्टेडियममा पहिले टस जितेर ब्याटिङ गरेको मुम्बईले निर्धारित २० ओभरमा ८ विकेटको क्षतिमा १४९ रनको योगफल बनाएको थियो । १५० रनको […]
फेवातालको बिचमा टापु बनाएर कफी सप बनाउने तयारी
May 9, 2019 May 9, 2019 Subas B.K0
पोखरा । गण्डकी प्रदेश सरकारले फेवातालको बिच भागमा कफी सप बनाउने तयारी गरेको छ । गण्डकी प्रदेशका उद्योग, पर्यटन, वन तथा वातावरण मन्त्री विकास लम्सालले फेवातालको बीच भागमा कफी सप बनाउने प्रदेश सरकारको योजना रहेको बताएका छन् । पोखरा आउने पर्यटकलाई नयाँ गन्तव्य बनाउन कफी सप स्थापना गर्न डिपिआर तयार पार्न लागेको मन्त्री लम्सालले बताए […]
मौराको ह्याट्रिकसँगै टोटेनहम च्याम्पियन्स लिगको फाइनलमा
एजेन्सी – ब्राजिलियन फरवार्ड लुकास मौराले खेलको दोस्रो हाफको इन्ज्युरी समयको अन्तिम मिनेटमा गोल गरेपछि टोटेनहम हट्सपर आयाक्सलाई पराजित गर्दै च्याम्पियन्स लिगको फाइनलमा पुगेको छ । पहिलो हाफमा २-० ले पछाडी परेको टोटेनहमका लागि लुकास मौराले दोस्रो हाफमा ह्याट्रिक प्रहार गरेका थिए । अवे खेलमा ३२ ले विजयी हुँदै टोटेनहम समग्रमा ३-३ को बराबरी पछि […]
बार्सिलोनालाई स्तब्ध पार्दै लिभरपुल च्याम्पियन्स लिगको फाइनलमा
May 8, 2019 May 8, 2019 Subas B.K0
एजेन्सी । च्याम्पियन्स लिग फुटबल खेल अन्तर्गत दोस्रो लेगमा अविश्वसनिय प्रदर्शन गर्दै स्पेनिस क्लब बार्सिलोनालाई ४–० ले हराएपछि इंग्लिस क्लब लिभरपुल च्याम्पियन्स लिगको फाइनलमा पुगेको छ । पहिलो लेग ३–० ले गुमाएको लिभरपुलले घरेलु मैदानमा बार्सिलोनामाथि जित निकाल्दै समग्रमा ४–३ गोलअन्तरमा अन्तिम दुईको यात्रा तय गरेको हो । यससंगै लिभरपुल लगातार दोस्रो वर्ष च्याम्पियन्स लिगको […]
लिभरपुलमाथि बार्सिलोनाको फराकिलो जित, मेस्सीको जादुयी फ्रिकिक
May 2, 2019 May 2, 2019 Subas B.K0
एजेन्सी । च्याम्पियन्स लिग फुटबल खेल अन्तर्गत बुधबार बार्सिलोनाले लिभरपुललाई सेमिफाइनलको पहिलो लेगमा फराकिलो अन्तरले पराजित गरेको छ ‌। फरवार्ड लियोनेल मेस्सी र लुइस सुआरेजले उत्कृष्ट खेल पस्केपछि बार्सिलोना ३–० गोलले विजयी भयो । खेलको २६ औँ मिनेटमा सुआरेजले घरेलु टोली बार्सिलोनालाई अग्रता दिलाएका थिए । उनले जोर्डि अल्बाको लो क्रसलाई पोस्टको दिशा दिँदै गोल […]
नारुहितो बने जापानका नयाँ सम्राट
May 1, 2019 May 1, 2019 Subas B.K0
बिबिसी । बुधवार विधिपूर्वक राज्यारोहण गर्दै नारुहितो जापानका नयाँ सम्राट छन् । राज्यारोहणको औपचारिक र परम्परागत विधि सम्पन्न भएपछि पहिलो पटक भाषण गर्दै उनले विश्वको जनताको सुख, देशको प्रगति र विश्वशान्तिको कामना गरेका छन् । उनका बुवा आकिहितोले राजगद्दी परित्याग गरेको दिनको मध्यरातपछि जापानी राजसंस्थाका उत्तराधिकारी नारुहितो औपचारिक रूपमा सम्राट बनेका हुन् ।नारुहितो नयाँ सम्राट […]
आयाक्सले टोटेनहमलाई उसकै मैदानमा हरायो
एजेन्सी । च्याम्पियन्स लिग फुटबल खेल अन्तर्गत सेमिफाइनलको पहिलो लेगमा आयाक्सले टोटेनहमलाई उसकै घरेलु मैदानमा १–० गोलको अन्तरले पराजित गरेको छ ।खेलमा पाहुना टोली आयाक्सका लागि भान डे बिकले पहिलो हाफको १५ औँ मिनेटमा गरेको गोल नै निर्णायक सावित भयो । पहिलो हाफको सुरुवाती समयमा आयाक्सले उत्कृष्ट प्रदर्शन गर्दै घरेलु टोलीलाई दवावमा राखेको थियो । […]